Iko kunoshamisa kuderedzwa kwemitengo yezuva | Green Renewables
Sosaiti inoenderera ichikakavara nezvekuti kuchenjera here kusabheja zvakanyanya pasimba rinowedzerwazve (simba rezuva, simba remhepo pakati pevamwe). Magetsi matekinoroji ari kutora hurumende dzehafu yepasi uye vari munzira yekushandura gakava iri kuita chimwe chinhu chisiri chechinyakare.
Imwe yematambudziko makuru kana zvipingamupinyi izvo mamwe masimba anomutsidzirwa aneye yakakwira yekutanga mari yekudyara. Zvisinei, maererano neshumo itsva kubva kuGTM Research, iyo mitengo yekuisirwa simba rezuva icharamba ichiderera nekusvika pa27% na2022. Iran paavhareji inodonhedza mitengo ne4,4% paavhareji kusvika 27%.
1 Mitengo yesolar energy inodonha
4 Mutengo wesimba rezuva vs mutengo wemarasha
Mitengo yesolar energy inodonha
Chirevo chinoita fungidziro pamitengo yezuva mafotavoltaic masystem. Mariri, maitiro anoenderera anogona kucherechedzwa anobatsira kudzikira kwemitengo yemabasa ezuva. Iyi mitengo haingodzikiswi chete mumutengo nekuda kwekuderera kwemutengo wema module, asiwo nevatengesi vanodhura, vateveri, uye kunyangwe mari dzevashandi.
Matunhu ese anokwanisa kusarudza simba rinowedzerwazve anozobatsirwa nemutengo uyu. Dzazvino rekodhi mitengo yakaderera yakabva kuIndia, uko nyika yekutengesa hurongwa hwave mukugadzirwa kwakatsiga uye zvakakonzera kukwikwidza kwakanyanya mabhizimusi. Izvi zvakakonzera kuti mitengo ive yakaderera uye yakaderera.
Idzi inhau huru kune avo vese vanhu vanosarudza kumutsiridza simba rekugadzira magetsi. Iyi ichave iri nhanho nyowani yekushanduka mushanduko yesimba ichienda kune yakanyanya kudzoreredzwa?
Masisitimu emagetsi ane hofori zvivakwa mune mari anoitwa aine akati wandei makore ekutarisira, kunyangwe makumi emakore. Ndicho chimwe chezvikonzero nei kugamuchirwa kwezvinhu zvinowedzeredzwa kunonoka: kamwe nyukireya, gasi, marasha (kana chero imwe mhando) chirimwa chakavakwa, hazvigoneke kuti chivhare pasi kusvika kumagumo ehupenyu hwayo hunobatsira. Dai zvaive, kazhinji nkana mari yacho yaizotorwa, izvo zvisiri kuzoitika nekuda kwema lobbies makuru kunze uko.
Vakawana nzira yekugadzira magetsi nemutengo wemakwikwi uye nenzira inogadziriswazve zvizere.
Mutengo wesimba rezuva vs mutengo wemarasha
Gore rino raratidza mujaho wesimba rezuva mune zvese zvinhu, kubvira kushanduka kwetekinorojiKumatengesi uko makambani akazvimirira anokwikwidza zvibvumirano zvikuru izvi zvekuwaniswa magetsi, mwedzi nemwedzi rekodhi inogadzirirwa yemagetsi ezuva anodhura.
Gore rakapera akatanga kondirakiti ye gadzira magetsi e $ 64 pa MW / awa kubva kunyika yeIndia. Chibvumirano chitsva muna Nyamavhuvhu chakadzikisa chimiro ichi kuva chimiro chinoshamisa chekungopfuura $ 29 megawatt nguva muChile. Mari iyoyo inhanho huru maererano nemutengo wemagetsi, ingangoita a 50% yakachipa kupfuura mutengo unopihwa nemarasha.
Nemushumo Yakatemerwa Mari YeMagetsi (Yakakwidziridzwa Mari dzeMhando dzakasiyana matekinoroji eMagetsi, pasina rubatsiro. Izvo zvinoonekwa kuti gore rega rega, zvinowedzerwazve zvakachipa uye zvakajairika zvinodhura.
Uye iyo tsika mutengo ndeye zvinopfuura pachena 😀
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Iko kunoshamisa kuderedzwa kwemitengo yezuva
Zvakanaka, ndakatenga mapaneru nemabhatiri mu2015 uye izvozvi ndinozvitsvaga online uye zviri pamutengo mumwe chete kana ZVIMWE ZVINODZIDZA. Iyo imwechete modhi, mhando, kugona ... Zvinoita sei?